आत्मनिर्भरता ! – व्यंग्य | paniphoto
आत्मनिर्भरता ! – व्यंग्य
दिपध्वनी	September 15, 2012	Post navigation
अकस्मात् ‘उनलाई’ सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । तुरुन्तै ‘उहाँले’ अस्पतालमा फोन गर्नुभयो । क्षणभरमै ‘एम्बुलेन्सदेव’ को सवारी भो । बिरामी बोकेर ‘सवारी’ केही छिनमै ‘मिसन हस्पिटल’ पुग्यो ।
डाक्टर ‘टोनी फर्नान्डिज’ ले गर्भवतीको ‘अल्ट्रा साउन्ड’ गरे । रिपोर्ट खतरनाक आयो । बच्चा आन्द्रामा बटारिएको रहेछ । उनले मिसनको ‘हेड क्वाटर’ बेलायतमा सम्पर्क गरे । मिसन प्रमुखले ‘अनलाइन अपरेसन’ गरेर डेलिभरी गराउन सकिने सुझाव दिए । त्यसपछि बेलायत र नेपालमा रहेका चिकित्सकहरूद्वारा ‘भिडियो च्याटिङ’को माध्यमबाट अपरेसन सुरु भयो । चार घण्टाको संयुक्त प्रयासपछि आमा र बच्चा दुवैको सकुशल उद्धार गरियो । सरकारी अस्पताल लगेको भए कसलाई के हुन्थ्यो, जान्न सकिन्न । नर्सिङ होमको बिल देखेर को-को ‘बेहोस’ हुन्थे, भन्न सकिन्न । धन्य, ‘ च्यारिटी अस्पताल’ भएकाले सुखद परिणाम आयो । त्यसका लागि विदेशी ‘डोनर’ र ‘डाक्टर’ दुवैलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । ‘अनलाइन डेलिभरी’ भएकाले सबैतिर बच्चाको चर्चा हुन थाल्यो । देश-विदेशका सरकारदेखि पत्रकारसम्म बधाई दिन बस्तीमा पुग्न थाले । यो साहसिक ‘डेलिभरी’कै कारण गाउँबस्तीमा ‘एनजिओ’हरूको ओइरो लाग्न थाल्यो ।
‘आइएनजिओ’को बाढी आउन थाल्यो । यो ओइरो र पहिरोको आगमन देख्दा यस्तो लाग्थ्यो- अनलाइनबाट जन्मिएको उक्त बालक नेपाल र ने पालीका लागि भगवानको अवतार नै हो । ‘युके एड’ले डोजर किनिदियो । ‘युएस एड’ले सडक खनिदियो । ‘जाइका’ले कालोपत्रे गरिदियो । ‘डानिडा’को सहयोगमा पोल गाडियो । ‘स्वीस को- अपरेसन’मा बिजुली बालियो । ‘रुम टु रिड’ले पढ्न सिकायो । ‘वाल्क टु स्टि्रट’ले हिंड्न सिकायो । कोही ‘हात धुन’ सिकाउन आए । कोही ‘दाँत माँझ्न’ सिकाएर गए । खानेपानी आयोजनाका लागि ‘डब्लएचओ’ अघि सर्‍यो । कृषिको विकासका लागि ‘डब्लुएफओ’ अघि बढ्यो । पर्यटन विकासमा भारतले सघाउने घोषणा गर्‍यो । उद्योगधन्दामा चीनले अनुदान दिने बतायो । नुनदेखि सुनसम्मको आयात बढ्यो । प्याजदेखि लसुनसम्मको कर खुकुलो पारियो । हात्तीपाइले र हेपाटाइटिसको सुईसम्मका लागि नेपालले एकपैसा खर्च गर्नुपरेन । यहाँसम्म कि ओढ्ने झुल र पढ्ने स्कुलमा समेत वैदेशिक सहयताको समुद्र पस्यो । ‘अनलाई बेबी’ हुर्किंदै गयो, बढ्दै गयो । स्थानीय ‘मिसनरी’ स्कुलमा पढ्दै गयो । उच्च शिक्षाका लागि भारत सरकारले ‘स्कलरसिप’ दियो, जसका कारण उसले जेएनयु दिल्लीबाट ‘दक्षिण एसियामा आत्मनिर्भरता’ विषयमा पिएचडीसमेत गर्‍यो ।
नेपाल फर्किएर ठूलो गैरसरकारी संस्थाको ‘अफिसर’ बन्यो । ‘आत्मनिर्भरता’ सम्बन्धी थुप्रै योजना देशमा भित्र्यायो । अल्लोबाट कपडा बुन्ने आयोजनाका लागि ‘डेनिस’ सहयोग उपलब्ध मिलायो । सल्लोबाट साबुन बनाउने कार्यका लागि ‘जर्मन सरकार’बाट थुप्रै रकम दिलायो । खाद्यान्न आपूर्तिका लागि ‘बंगालादेश’सँग सम्झौता भयो । गरिबी न्यूनीकरणका लागि ‘युरोपियन युनियन’सँग सहयोग मागियो । अफसोच, छोटो समयमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ती ‘अनलाइन बेबी’ अकस्मात् दुर्घटनामा परे । एउटा कूटनीतिक नियोगको कार्यक्रममा जाँदा कूटनीतिज्ञकै गाडीले ठक्कर दिएपछि उनी गम्भीर घाइते भए । नेपालमा उपचार सम्भव भएन । थाइल्यान्ड लगियो । लामो समयको उपचारपछि नेपाल फर्काइयो । उपचारको सम्पूर्ण लागत थाई सरकारले निःशुल्क गरिदियो ।
उनलाई एक दिन सरकारले मानार्थ डाक्टर पद्वी प्रदान गर्ने भयो । पद्वी हस्तान्तरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिलाई बोलाइयो । पद्वी ग्रहण गरेर र्फकंने क्रममा ‘डाक्टर अनलाइन बेबी’ अचानक भर्‍याङबाट लड्न पुगे । हत्तपत्त उनलाई तिनै प्रतिनिधिको गाडीमा हालेर ‘मिसन हस्पिटल’ पुर्‍याइयो । दुर्भाग्य, डाक्टर फर्नान्डिजले उनको मृत्यु भैसकेको कुरा बताए । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बानेश्वर सम्मेलनकेन्द्रमा लगियो- जुन चिनियाँ सहयोगमा बनेको हो । साँझ विशाल जुलुससहित उनको शव ‘नेपाल विद्युतीय शवदाह केन्द्र’ पुर्‍याएर सधैंका लागि बिदा गरियो, त्यो पनि वैदेशिक सहयोगमै निर्माण गरिएको थियो ।
यसरी न हामी जन्मिने कुरामा ‘आत्मनिर्भर’ रहन सक्यौं, न त मृत्युवरण गर्ने विषयमै ‘आत्मनिर्भर’ हुन सक्यौं । कन्डमको प्रयोग गर्ने तरिकादेखि मृत शरीरको सदुपयोग गर्नेसम्ममा हाम्रो ‘आत्मनिर्भरता’ कतै भेटिंदैन । के ‘परनिर्भरता’ को यो लामो ‘जीवनकथा’मा ‘आत्मनिर्भरता’को उदाहरण कतै छैन होला त ? किन नहुनु, अवश्य छ । गजुरियल विश्लेषण भन्छ- त्यही ‘कन्डमको प्रयोग कसरी गर्ने’ भन्ने ज्ञान र ‘बच्चा कसरी जन्माउने’ भन्ने विज्ञानको बीचमा जुन ‘महान् कार्य’ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी निश्चित रूपमा ‘आत्मनिर्भर’ छौं । कि छैनौं पो ?
(साप्ताहिकमा प्रकाशित मनोज गजुरेलको लेखलाई जस्ताको तस्तै साभार गरिएको ।)
This entry was posted in हास्यव्यंग्य - रमाइलो and tagged आत्मनिर्भरता, हास्यव्यंग्य - रमाइलो. Bookmark the permalink.	2 thoughts on “आत्मनिर्भरता ! – व्यंग्य”	Saroj says:	April 29, 2012 at 1:02 pm	very real and inspiring article. जय होस् गजुरेलको
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	महेश चौधरी says:	April 29, 2012 at 1:13 pm	मनोज गजुरेलको विश्लेषण एकदम ठिक लाग्यो, हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर हुँदैछौ /